JOINTS Factory, Suppliers - China JOINTS na-emepụta
VSSJA-2 (B2F) Pịnye Ugboro abụọ Flange Limited Telescopic Joint
Ngwaahịa imepụta atụmatụ Isi budy nke ngwaahịa a bụ nke akụrụngwa dị elu, ike dị elu, dị mfe iji, na ngwa ngwa ịwụnye. Nwere ezigbo mmebi ahụ, nkwụsị mmanụ, acid na nguzogide alkali. Ọdịdị nke ngwaahịa a bụ ihe ezi uche dị na ya. Ọrụ arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Ọ dịghị ịgbado ọkụ achọrọ. Mfe ibu na ibudata, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mwepụ, ịhazi na ịgha nke pipeline n'ime ụfọdụ. Workingkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ mgbe bei ...
Mgbanwe Rubber Joint
Arụmọrụ arụmọrụ Mgbanwe roba nkwonkwo, nke a na-akpọ vibration absorber, anwụrụ vibration absorber, mgbanwe nkwonkwo na sooks nkwonkwo na na, bụ anwụrụ nkwonkwo na elu mgbanwe, elu ikuku tightness na ezi na-ajụ-eguzogide na ihu igwe na-eguzogide. Njirimara arụmọrụ ya bụ: 1. Ọ dị obere, obere nha, ịdị mma na mgbanwe, dị mfe maka nrụnye na ndozi. 2. N'oge echichi, transverse, axial na angular Ndahie ga ...